Myat Shu - 2013 May
You are here : Myat Shu » Archives for May 2013
Published By Myat Shu On Tuesday, May 21st 2013. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
www.fineartamerica.com ကိုယ့်ရေကိုယ့်မြေမဟုတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ အနေကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုခဏခဏ ဖြေရပါတယ်။ ကျွန်မ ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေနေတတိယနေရာဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ ပထမနေရာ ကျွန်မရဲ့အိမ် မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုက အမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံလေးကို ရောက်စတုန်းက ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့ တတိယနေရာ ဆိုပြီးရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လေ့လာမှု အားနည်းတာရယ် ဗဟုသုတနည်းလွန်းတာကြောင့် အဲဒီပို့စ်လေးမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေအကြောင်းကို ရေးခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာလေးမှာ အနေကြာလာတာနဲ့အမျှ သွားရင်းလာရင်း မြင်ရကြားရ ခံစားရတာတွေက အရင်ကနဲ့စာရင်သိသိသာသာ ခြားနားလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း သူတို့ဆီက ကြားရသိရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကကျွန်မနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်က တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေဖြစ်နေတာမို့ ... Continue Reading
မဆုံးသောတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ .. နေ့ရက်များအဆုံးထိလွင့်ပြယ်ခြင်း
Published By Myat Shu On Tuesday, May 21st 2013. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်ဟာ သူ့အတွက်ဖြစ်တယ် ကူကယ်ရာမဲ့အေးစက်သွားလည်း … သူ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ် ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ .. နီးစပ်ခြင်းက အနားသတ်မျဉ်းတစ်ခုသက်သက် ပြီးရင် .. အားလုံးကြေပျက်ရတယ် ဖုန်အလိမ်းလိမ်း ညစ်ပတ်ပေကျံဖူးတဲ့လမ်းတွေလည်း .. ဖြူစင်သစ်လွင်ခြင်းနဲ့စခဲ့တာပါပဲ အပြန်လမ်းဟာ .. နောက်ဆုံးလိုလို အမှတ်တမဲ့လိုလိုနဲ့ .. လှလှပပ ခေါက်ရိုးကျိုးခဲ့ဖူးပါတယ် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တွေ့တဲ့အထိ .. ဘူတာလေးကတော့ စိမ်းကားအေးစက်နေဆဲပဲ မနေ့တစ်နေ့က အကောင်းဆုံး ဟင်းလျာတစ်ခွက်ကို မြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရုံ ကမ္ဘာကျော် ဂန္ထ၀င်ရုပ်ရှင်တစ်ကား ကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုရုံ အဲဒီနွယ်မျှင်တစ်ခုဆီက .. ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွတ်မြောက်ချင်ပါတယ် မေ့လွယ်ပျောက်လွယ်ခွင့်သာရှိမယ်ဆိုရင် .. လောကဓံကိုလည်း တိတ်တဆိတ်လာဘ်ထိုးကြည့်ချင်သေးတယ် အပူနဲ့တွေ့တိုင်းသာ အရည်ပျော်ဆင်းရရင် ခက်ရချည်ရဲ့ကွယ် ဒါပေမယ့် .. ငါဟာ ပိုးဖလံမျိုးဖြစ်တယ် .. အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာနဲ့ပဲ .. မီးပုံထဲ ခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ် တစ်ဖက်သတ်ကြီး .. ကြွေလွင့်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုအကြောင်းပါ အိမ်မက်ထဲ .. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့နံပါတ်မျိုးနဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံစီးခဲ့ဖူးတယ် အဲဒီနောက်တော့ ခြေထောက်က ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, May 16th 2013. Under မျက်ရှု, ရသ, အက်ဆေး
မနက်လင်းတာနဲ့ ဘွားဆီပြေးလာပြီး ဘွား ‘ကာဖီကျွိ … ကာဖီကျွိ’ နဲ့ အော်နေတော့တာပဲ … ဘယ်လိုပဲ ကော်ဖီကြမ်းလို့ သင်သင် သင်မရဘူး … ကာဖီကျွိပဲ … ဘွားကိုလည်း ကာဖီကျွိပဲ ခေါ်ခိုင်းတယ် … ဘွားက ကော်ဖီကြမ်းဆိုရင် မြေးက .. ဟုတ်ပါဘူးဘွားရဲ့ .. ကာဖီကျွိပါဆိုပြီး မြေးက မပီ့တပီနဲ့ပြောတဲ့အသံကို ဘွားကပါလိုက်ပြောမှ ကျေနပ်တယ်…”